Xasan Sheikh ‘Qabyo’ Yuu uga tagay Casharadkii uu Kenya u dhigi Jiray | Wardoon
Home Somali News Xasan Sheikh ‘Qabyo’ Yuu uga tagay Casharadkii uu Kenya u dhigi Jiray
Xasan Sheikh ‘Qabyo’ Yuu uga tagay Casharadkii uu Kenya u dhigi Jiray
Sanadkii 2016, wuxuu ahaa sannadkii ugu dambeeyay ee muddo xileedkiisa. Sanadkii ka horeeyay wuxuu Maxkamadda Caddaaladda Adduunka ICJ la tiigsaday Kenya si ay go’aan uga gaarto sheegashada Kenya ee badda. Wuxuu ahaa go’aan ay illaa iyo hadda Kenya ka galgalanayso.
Sept 5, 2016, wuxuu wasiirkiisa Gaadiidka iyo Duulista Cali Jangeli sheegay in qaadkii Kenya ka imaan jiray la joojiyay xilli shirkii ugu horeeyay ee IGAD ee ka dhaca Soomaaliya loo ballansanaa maalmo gudahood. Go’aanka dowladda ayaa lagu sheegay in uu salka ku hayo booqasho uu guddoomiyaha gobolka qaadka ugu badan dhoofiya Peter Munya uu ku tagay Hargeysa iyo war meel ka dhac ah oo uu sheegay.
Uhuru in kasta oo uu ka tabanayay jug maamulkii Xasan Sheekh uu dalkiisa u geystay, haddana shirkii IGAD ee ka dhacayay Muqdisho September 10, 2016 wuu soo xaadiray.
Waxaa ka sii cajiibsanayd markii loo diray soo dhoweyntiisa wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Cali Jangali, oo aan protocol ahaan kaalintaas lahayn, balse waxaa lagu gaarsiinayay farriin ah in qofkii qaadka mamnuucay uu haddana soo dhoweynayo.
Qaladaad way ka dhaceen laakiin madaxweyne Xasan Sheekh casharo culus ayuu Kenya u dhigi jiray.
Ma laha Kenya waxay ka mid ahayd howlaha qabyada ahaa ee uu dhamaystiri lahaa! Sidii uu ku waday ha loo dhamaystiro haddii aan laga sii qurxin karin.
Previous articleMadaxtooyada Soomaaliya oo war ka soo saartay kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta
Next articleXeer Ilaaliyaha Qaranka”Waxaa xiran Oday 40 jir ah oo kufsaday Gabar 5 Sano jir ah”
Nin xaaskisa dilay oo xukun adag lagu riday
Wariyihii hore ee BBC-da Cabdullahi Xaaji oo lawaayay